Ahoana ny fomba hamelezana ny trosa banky? Ny Semalt no manome ny valiny
Dyre Banking Trojan dia heverina ho adware mampidi-doza izay manana fahafahanaAdiresy entrench eo amin'ny teny eo amin'ny tranonkala iray. Ireo fandaharam-potoana izay matetika tsy tian-tsoa dia mikendry ny hanangana fomba fijery tsara momba azy ireofitokisana ary mamoaka vokatra amin'ny alalan'ny dokam-barotra toy ny lahatsoratra an-tsoratra sy endrika endrika hafa. Ny adware dia mahazo ny azy manokanafampahalalana amin'ny fanaraha-maso ny cookies amin'ny tranonkala miaraka amin'ny tanjon'ny fampisehoana dokam-barotra kokoa - sigelei 75 watt not firing on 1.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ity adware ity dia manana fahafahana hanafika ilay rafi-pamokaranamiara-miasa amin'ny programa azo amidy na programa hafa. Ankoatra izany, voalaza fa ny ordinateran'ny ankamaroan'ny olona dia voan'ny aretinarehefa misarika rohy amin'ny tranokalan'ny vahoaka ny mpampiasa.
Ny Tempoly Dyre Banking dia mametraka matetika ny fanampiana tsy ampiasaina ao amin'ny tranokalanaodia miteraka olana toy ny pop-ups, famerana haingam-pandeha, ary fanodinana navigateur.
Amin'ny tranga sasany, ny Dyre Banking Trojan dia afaka manatsara ny fitetezanaotraikefa. Fa zava-dehibe kokoa ny manamarika fa ny tombony dia kely kokoa raha ampitahaina amin'ny voka-dratsy eo amin'ny rafinao hatramin'ny ankoatra izanyFametrahana ny dokam-barotra amin'ny tranokalanao, manangona ny mombamomba anao izy. Noho izany, dia manoro hevitra mafy ianao fa hanaisotra haingana an'i DyreBanking Trojan avy amin'ny rafitrao mba hiarovana amin'ny olana mialoha.
Ivan Konovalov, mpitantana ny Success Successor Semalt ,dia manoritsoritra ireo torohevitra sarobidy izay hanampy anao hamaha ity adware ity.
Ny loza aterak'io Dyre Banking Trojan
1. Mampihetsi-po anao ny asa ataonao amin'ny aterineto amin'ny mety hampidi-doza. Manokatra ny adwareNy pejin'ny pejy fikarohana anao amin'ny tranonkala maloto izay tarihin'ny viriosy mampidi-doza.
2. Manova ny rafitra ny rafitrao ary amin'ny fanaovana izany dia manampy ireo hackers amin'ny adiresymifehy ny ordinateranao..
3. Mifandraika amin'ny fandrahonana hafa mampidi-doza toy ny kankana, adware, Trojan, spywareNy zava-drehetra, ny fiantraikany eo amin'ny rafitry ny ordinateranao.
4. Mampihena ny fahombiazan'ny rafitrao izany ary mety hanimba ny rafitrao.
Fitsipika hamonoana tanteraka ny Dyre Banking Trojan amin'ny solosainao manokana
Azonao atao ny manaisotra ity adiresy ity na amin'ny alalan'ny fomba fanesorana na famerenana automatiquetsehatra. Raha tsy mahay amin'ny fitantanana ordinatera ianao, dia voatery haka ny fitaovana maody hanampy anao.
Ireto torohevitra manaraka ireto dia afaka manampy anao hanaisotra ny viriosy:
Dingana 1 : Tsindrio ny fanalahidy CTRL + Shift + ESC miaraka amin'ny tanjonamanomboka ny manager manager. Manomboha amin'ny fitadiavana ireo dingana mifandraika amin'ny Dyre Banking Trojan amin'ny fipihana ny tabilao Processes.
Etap 2 : Fadio ary esory ny rakitra mifandraika amin'ny adware ao amin'ny lisitry nyIreo lahatahiry voalaza etsy ambany.
Dingana 3 : Tsindrio R + ny varavarankely ary soraty ny teny hoe "regedit" ao amin'ny Box Runary aorian'izay dia tsindrio OK mba hanombohana ny tonian'ny registry.
Dingana 4 : Fidio ny fanampim-panazavana mifandraika amin'ny virus avy amin'ireo mpizahatoka voan'ny adware.
Ahoana no hiarovana ny PC amin'ny malware
Ny mpampiasa tranonkala dia tokony hahaliana rehefa mandefa rindrambaiko avy amin'ny Internet ary koa rehefamitsidika tranokala samihafa. Tokony ho azo antoka fa avy amin'ny tranonkala malaza rehetra ny fampirimina rehetra. Amin'io lafiny io, manoro hevitra anao izahay mba hanana afitaovana mahery vaika amin'ny rafitrao mba hiarovana ny solosainao amin'ny loza mety hitranga.